March 2010 | Brightening day
Home » Archive for the month March 2010
Reds In Bangkok
မေ့နေတဲ့ အိပ်မက်တွေကိုလဲ လာမနှိုးပါနဲ့
ဖြူနေတဲ့ တိမ်တိုက်တွေကိုလဲ အရောင်မဆိုးပါနဲ့
အချိုးကျန လှပနေတဲ့ ညနေတွေကို လဲ မခြေမွပါနဲ့
ကြောက်ပါရဲ့  ချစ်လှပါချည်ရဲ့ ဆို။
ဒီမှာ အလွမ်းသီချင်းတွေကိုပဲ solo ဆိုနေရတာ စိတ်ကုန်လွန်းလို့ပါ။
Don't wake up the forgotten dreams.
Don't color the white clouds in the sky with beams.
Don't break the beautifully shaped evenings into dim.
Afraid of "Love you so much" and seem.
Tired of soloing sad songs alone at nearby stream.
lyric : http://www.romantic-lyrics.com
source : sueuk
တစုံတရာတို့ကို ဆုံးရှုံး ရလေသည်။
ထိုထိုသောတစုံတယောက်တို့သည်လည်း တိုးတိုးတဖုံ ကျယ်ကျယ်တမျိုး ငိုကြွေးသမှု ပြုရလေသည်။
Katreeya English - O.K. Naka Live at Sanam Laung Concert
Myanmar Embassy , Thailand
HOT SPOTS FOR BANGKOK THIS WEEKEND
photo by : lynnnay
ငါ့ ကဗျာရဲ့  အနားသတ်က ဘာလဲ
အနာဂါတ်က မရေရာတဲ့ အထာကြီးနဲ့ လှမ်းပြောင်ပြနေသေးတယ်။
ဒါဟာ ကဗျာထဲက သံစဉ်လား
ငါနားထောင်နေတဲ့ သီချင်းတွေက စိတ္တဇရယ်။
ဟိုး ပဝေသဏီက ဂီတလှိုင်းတွေနဲ့။
ငါ့အိပ်မက်တွေကို အရည်ကျိုလို့ ယူသွားပါ။
ဒါဟာ ထာဝရ ကျဆုံးမှုမရှိတဲ့ ကဗျာတပုဒ်ပဲ
တောင်တန်းရဲ့  နံရံပေါ်မှာ
ဘယ်ဘ၀က ကျိန်စာလဲ တကတည်းကွာ
မွှေးပါစေ ပန်းတွေရယ် မင်းအနားမှာ
ကြင်နာစွာ ဝေဖြာပါစေကွယ် လေပြေရယ်
ဒီကဗျာကို ချစ်သူရင်မှာ ကြားပါစေရယ်
အချစ် တပွေ့  တပိုက်ရယ်
ကိုယ်လေ ဖြူစင်တဲ့ ဆောင်းကိုခင်းထားတယ်။
လင်းနေ(ရင်မှသံစဉ်) 2:30 AM 01 March 2010
I was being isolated by the laws of life.
I was being treated likeadiver knows nowhere to dive.
I knew this is not right.
I just saw the bright light.
May beameteor strikes the night.